Barley (ဘာလီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Barley (ဘာလီ)
Barley (ဘာလီ) ကဘာလဲ။
ဘာလီ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Barley ဟာ ပင်မ အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘီယာချက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုပြီး miso ပြုလုပ်ဖို့လည်း အချဉ်ဖေါက်နိုင်ကာ မုယောသကြားရရှိဖို့ သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။
Barley ကို သွေးသကြားဓါတ်နည်းအောင်၊ သွေးပေါင်နဲ့ ကိုလက်စထရောကျအောင်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းအောင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်းနဲ့ အူရောင်ခြင်းတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
အချို့သူတွေက Barley ကို အားရှိပြီး ခံနိုင်ရည်မြင့်မားအောင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အခြားအသုံးဝင်ပုံတွေကတော့ ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းနဲ့ အဆုတ် ပြွန်ရောင်ခြင်းကို ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Barley ကို အပူလောင်တာတွေကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အရေပြားပေါ်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Barley ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အောက်ပါအချက်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတွေတော့ ရှိပါတယ်။
HIV ရောဂါ၊ ညစ်ညမ်းစေတဲ့ အရာတွေကို အဆိပ်ထုတ်ခြင်း၊ အားအင်နဲ့ ကိုယ်ခံအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဘာလီ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Barley ဟာ သွေးသကြားဓါတ်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ခွဲစိတ်နေစဉ်နဲ့ ခွဲစိတ်အပြီးမှာ သွေးသကြားဓါတ် ထိန်းချုပ်မှုကို နှောင့်ယှက်တတ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်လုပ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်ခင် နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီး Barley အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ ဒီ Herbal supplement အတွက် စည်းမျဉ်းတွေဟာ
ဆေးတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေလောက် တင်းကျပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အာနိသင်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီ Herbal supplement ကို မသုံးစွဲခင် ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဒွန်တွဲစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘာလီ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Barley ကို ကိုယ်ဝန်အောင် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆေးအနေနဲ့ ပမာဏအများကြီး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Celiac ရောဂါနဲ့ အခြား Barley ကို ဓါတ်မတည့်တဲ့သူတွေမှာ Barley ပင်ကို စားခြင်းကနေ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
Barley ဟာ သွေးသကြားဓါတ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆီးချိုဆေးတွေ သောက်နေရင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆေးပမာဏ အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဘာလီ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Barley မှာ အရေပြားရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ အစရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာလီ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Barley ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးတွေကိုအသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဆီးချိုဆေး – ဆီးချိုဆေးတွေနဲ့ တွဲသောက်ခြင်းဟာ သွေးသကြားဓါတ်ကို အလွန်အကျွံ ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးများ – Barley မှာပါတဲ့ အမျှင်ဓါတ်ဟာ ဆေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓါက စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဘာလီ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အဆီကျစေတဲ့ အာနိသင်ကို စမ်းစစ်ထားတဲ့ လေ့လာမှုတွေဟာ ဆေးပမာဏကို တစ်နေ့ကို 3-10 g အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး 3g အသုံးပြုခြင်းဟာ ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
Barley ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘာလီ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Barley ဟာ အစားအသောက်တွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုံစံဆိုပြီး မရှိပါဘူး။
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print
version. Page 49.
Barley. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 799-barley.aspx?activeingredientid=799&activeingredientname=barley. Assessed August 3, 2016.